5 ဇန်နဝါရီလတွင်ထိပ်တန်း STP ပွဲစား ၅ ဦး Pros & Cons အဝတ်မခြုံဘဲ
5 ၏ထိပ်တန်း STP ပွဲစား ၅ ဦး
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20 ဇန်နဝါရီလ 2021
Forex မြင်ကွင်းကိုသင်အကျွမ်းတဝင်ရှိပါကကုန်သည်များကစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အဓိကအသုံးပြုသောပွဲစားသုံးမျိုးရှိသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား STP ပွဲစားများ, ECN ပွဲစားများနှင့်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူပွဲစားများဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာဖြင့်အရာရာကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်စေလိုသောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ STP ပွဲစားများရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာဤအချက်မှာ Forex ကုန်သည်များသည်သူတို့၏စျေးကွက်အမိန့်များအားချက်ချင်းပင်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် STP ပွဲစားများသည်သင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် Forex စျေးကွက်များအကြားအလယ်အလတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါကြာလိမ့်မယ် အစဉ်အလာအားဖြင့် Forex ကုန်သည်များနှင့်စျေးကွက်များနှင့်ဆက်နွယ်သောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားပွဲခုံတစ်ခုရှိနေခြင်း။ သင့်ထံတွင်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အမိန့်များရှိသည်သာမကသင့်အားငွေထုတ်ချေးသူများကိုတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းပေးသည်။
သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်ပွဲစားများစွာသည် STP ပံ့ပိုးသူများအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြရာမည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုသိရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုစုစည်းထားပါသည်။ ၎င်းတွင် STP ပလက်ဖောင်းများ၏အခြေခံများ၊ မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုသင့်သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအထောက်အကူပြုသောအကြံဥာဏ်များနှင့်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအကောင်းဆုံး STP ပွဲစား ၅ ယောက်ကိုပါဖုံးလွှမ်းထားသည်။
STP သည် 'Straight Through Processing' အတိုကောက်ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ခန့်ကလန်ဒန်မြို့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ STP သည်အီလက်ထရောနစ်နည်းသောကြောင့်ကြားဖြတ် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိပဲထိုကဲ့သို့သောပွဲစားများသည်အလိုအလျောက်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းကို STP ဟုခေါ်ပြီးကုန်သည်များအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။
သမားရိုးကျငွေပေးချေမှုစနစ်ထက်ပိုမိုထိရောက်သည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ထားကြသော 'ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်' ကဲ့သို့သောငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများသည်ယခုစနစ်ကိုသိသိသာသာပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းဤ STP ပွဲစားများနှင့်ဆက်ဆံသည့်စားပွဲခုံသည်လုံးဝမလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
Layman ၏စည်းမျဉ်းအရဆိုလိုသည်မှာ STP ပွဲစားသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ရုံးခန်းမှတစ်ဆင့်ဆက်ဆံမည့်အစားသင်၏အမှာစာများကိုငွေလွှဲပြောင်းပေးသူများကို (သွေဖည်ခြင်းမရှိဘဲ) လွှဲပေးလိမ့်မည်။ ငွေချေးသူများသည်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များစျေးကွက်အတွင်းတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဤဘဏ္institutionsာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်းများမှရန်ပုံငွေများနှင့်ဘဏ်များအထိဖြစ်နိုင်သည်။
ငွေထုတ်ချေးသူများသည်ဘဏ်များအကြားအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောပံ့ပိုးပေးသူများရှိကြပြီးတစ် ဦး ချင်းစီသည်လေလံဆွဲသူဈေးနှုန်းကိုကိုးကားကြလိမ့်မည်။
သင်၏ STP ပွဲစားသည်တစ် ဦး ချင်းတွင်ငွေထုတ်ချေးပေးသူခြောက်ယောက်ရှိသည်။
သူတို့ကလေလံဆွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အတွဲ ၆ ခုစီကိုကြည့်ရှုသွားမည်။
ဤငွေဖြစ်လွယ်မှုပံ့ပိုးပေးသူဈေးနှုန်းများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် STP အကျိုးဆောင်စနစ်သည်လေလံဆွဲသူအားအကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်အလိုအလျောက်စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်အနည်းငယ်မျှထပ်တိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
ငွေစက္ကူတစ်ခုချင်းစီတွင်ထည့်သွင်းထားသောဤ“ ပိုက်” သည်အဓိကအားဖြင့်မင်းအတွက်စျေးနှုန်းများနှင့်ငွေထုတ်ချေးမှုများရရှိရန်ပွဲစား၏ကော်မရှင်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောငွေကြေးပမာဏကိုသင်ဝယ်ယူရန်သင်၏အမှာစာကိုချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ပွဲစားသည်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုငွေပေးချေရန်ပံ့ပိုးသူထံသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်မိနိုင်သည့်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ STP ပွဲစားများသည်သင့်အားပြန်လည်ကိုးကားခြင်းမပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုမကြာခဏပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အခြားပွဲစားများနှင့်မတူသည်မှာမလိုအပ်သောနှောင့်နှေးမှုများမများကြောင်းကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ FIX (Financial Information Exchange) protocol တိုးတက်လာခြင်းကြောင့် STP ကိုရရှိနိုင်သည်။
STP ၏အခြေခံကျသောအချက်များမှာမှာကြားမှုအချိန်ကိုပိုမိုတိုတောင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည် slippage နှင့်ပြန်လည်ကိုးကားအတွက်လျှော့ချဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြများနှင့် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုသင်ရရှိနိုင်စေသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခမရှိခြင်းကြောင့် STP ပွဲစားများကိုအနည်းငယ်ပိုမိုရိုးရှင်းသည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
ပွဲစားမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ပံ့ပိုးသူသည်၎င်းမှအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် ပျံ့နှံ့ တိုင်းကုန်သွယ်ရေးအပေါ်အခကြေးငွေ။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ဖက်စလုံးမှရိုးသားဖြောင့်မတ်သောကုန်သွယ်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နည်းပညာသည်ဈေးနှုန်းများကိုခွဲခြားသည့်အခါဤအမြန်နှုန်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့် STP ပွဲစားသည်သင်၏အမှာစာများကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးနိုင်ပြီးဖြည့်နိုင်သည်။
STP ပြန့်ပွားမှုကိုကြည့်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုး (ငွေထုတ်ချေးပေးသူများမှကမ်းလှမ်းသော) မှရရှိသောလေလံဈေးနှုန်းများအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်
ပွဲစားမရွေးခင်စျေးကွက်နှင့်ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကိုအခြေခံနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။ STP နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောစီးပွားရေးပုံစံများဖြစ်သော Forex ပွဲစားများဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းများကိုကိုးကားရန်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကအသုံးပြုသည့်စနစ်နှင့်ချုပ်ကိုင်ထားခြင်းသည် STP ပွဲစားများ၏အနှစ်သာရကိုနားလည်ရန်အမှန်ပင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
စျေးကွက်ပြုလုပ်သူကိုမကြာခဏဆိုသလိုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားပွဲဟုလည်းခေါ်သည်။ STP ပွဲစားများနှင့်မတူဘဲစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ငွေထုတ်ချေးသူများကိုဖြတ်သန်းသွားမည့်အစားလေလံဆွဲသူများထံမှစျေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဈေးနှုန်းသည်စျေးကွက်ပေါက်စျေးနှင့်တူသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲစားများသည်အခြားငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးသူများနှင့်ဖောက်သည်ရာထူးများကိုမထားပါ။ သူတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံဆွဲခြင်းကိုစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ကြသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏ပလက်ဖောင်းတွင်စျေးနှုန်းများစစ်ဆေးပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ရာထူးများကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။
စွန့်စားရမှုကိုတရားမျှတစေရန်ငွေရှင်းလွယ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲစားများသည်တစ်ခါတစ်ရံပိုမိုကြီးမားသောရာထူးများကိုငြင်းပယ်ကြသည်။ STP ပွဲစားများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ပြန့်ပွားခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ မှတ်သားရန်မှာမှတ်သားဖွယ်အချက်များမှာ slippages နှင့် re-quotation များသည်စျေးကွက်ချမှတ်သူများနှင့်လေ့ကျင့်လေ့ရှိသည်။
ပွဲစားအများစုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် STP ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် - သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါက STP ပလက်ဖောင်းမှသင်အကျိုးခံစားရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူမှစျေးနှုန်းမြှင့်တင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ဘဏ္newsာရေးသတင်းကြေငြာချက်၏နောက်ကျောတွင် (အမိန့်များကိုလည်းငြင်းပယ်နိုင်သည်) ။
သို့သော် STP ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများကအမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေသူများနှင့်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်သင့်အားပေးသည်။ အရေးကြီးသည်မှာသူတို့၏ကိုးကားချက်များသည်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အတူတကွစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
STP ပွဲစားများသည်အဓိကအားဖြင့်စနစ်သည်အရည်ပံ့ပိုးသူများထံမှစျေးနှုန်းများကိုစုဆောင်းသောကြောင့်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုဤကျယ်ပြန့်သောမတူကွဲပြားမှုများကိုသင်ရရှိနိုင်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည် ပိုမို၍ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
STP ပွဲစားများသည် DMA ကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ဝင်ရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည် ECN ပွဲစားများနှင့် STP ပွဲစားများတူညီသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ECN ပလက်ဖောင်းများသည် DMA ကိုအမြဲတမ်းပေးသော်လည်းအချို့သော STP ပွဲစားများကမူမပေးနိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ စာရင်းမသွင်းမီဤအရာကိုအမြဲစစ်ဆေးပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ DMA protocol သည်သင့်အားကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်စျေးကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်သင်သည်ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးသူများနှင့်အမှာစာများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုများမှပြုလုပ်သည်။
အချို့သောအသုံးများသော DMA အင်္ဂါရပ်များမှာ
DMA မရှိသော STP ပွဲစားများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟုပြောနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှာစာများကိုသင်၏ပွဲစားများမှဖြည့်စွက်ပြီး၊
သင်၏ STP ပွဲစားမှတစ်ဆင့်သင်ရရှိနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရရှိနိုင်သောထောက်ပံ့ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်များသောအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
STP ပွဲစားသည်ငွေထုတ်ချေးပေးသူနှင့်သင်အားကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသဖြင့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောမမြင်ရသောအဆင့်လိုအပ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် STP ပွဲစားနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမည်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ သငျသညျလုံးဝအမည်မသိပါလိမ့်မယ်, နှင့်အရောင်းအဝယ်စစ်မှန်သောစျေးကွက်အခြေအနေများနှင့်ဘက်မလိုက်စျေးနှုန်းများပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းကြသည်။
ဤသည်ဥပမာ, scalpers များအတွက်တကယ်ကောင်းသောနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ချွေတာခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ကိုးကားခြင်းများကိုစိတ်ပူစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်များအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောနှုန်းထားများနှင့်ငွေပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မှုကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ။
STP ပွဲစားများသည်ကုန်သည်များကြားတွင်အမြဲတမ်းကြားနေနေခြင်းကြောင့်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအမြတ်ရရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည် STP ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများတွင်အရောင်းအ ၀ ယ် (desk market) မပါ ၀ င်ကြောင်းသင်သိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ 'ဖန်တီးသူ' ထက်သင်အမှန်တကယ်စျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်များကို ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
STP ပွဲစားများသည်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီးယုံကြည်စိတ်ချရစေသည်ဟုကုန်သည်များကယုံကြည်ကြသည်။ သင်သည်ဤပွဲစားကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြန်ဆန်သောငွေဖြည့်ခြင်းများကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုအတွက် ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုပေါင် ၁၀၀ နှင့်ရောင်းသူကသဘောတူသည်။
ပေါင် ၁၀၀ ကိုဖြည့်စွက်အဖြစ်လူသိများသည်။
အဘယ်သူမျှမ Re- ကိုးကား
ငွေထုတ်ချေးပေးသူများကြောင့်သင်၏ STP ပွဲစားသည်သင့်ပွဲစားမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှင့်ဖြန့်ဝေမှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤကိုးကားချက်များရရှိနိုင်သည့်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာမှာသင်သည်မည်သည့်ပြန်လည်ကိုးကားမှုမျိုးကိုမဆိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၊ ပစ္စည်းတန်ဖိုးတစ်ခုပြောင်းလဲမှုကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအမှာစာတစ်ခုအားပယ်ချသောအခါ၊ STP ပွဲစားတစ် ဦး မှတစ်ဆင့်မရောင်းဝယ်ပါကသက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းသည် (အစပိုင်းတွင်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ကြုံခဲ့သော) ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လည်ကိုးကားရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ပြန်လည်ကိုးကားချက်များသည်ရေရှည်တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်မှုများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင်၏မျက်နှာသာရခဲသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲစားများနှင့်မတူဘဲ; STP ပွဲစားများနှင့်အကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခမရှိ။ STP ပွဲစားများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များထံမှငွေရှာမည့်အစားဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားကိုဘယ်တော့မှရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သူတို့သာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမင်းရဲ့မအောင်မြင်မှုတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရနိုင်ပြီးအမြတ်အစွန်းရရှိလိမ့်မယ်။
STP ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီကို (mark up ဟုလည်းခေါ်သည်) အပေါ်အနိမ့်ဆုံးကော်မရှင်အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖန်တီးရုံသာဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစား STP ပွဲစားရွေးချယ်တဲ့အခါ
Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့သည်ပွဲစားကောင်းတစ် ဦး ကိုရှာဖွေသောအခါစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ အနည်းဆုံးစဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပဲ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေသည်လုံခြုံမှုရှိကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။
မင်းအတွက်အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမင်းက variable အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ spreads တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တာကောင်းတယ်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စျေးနှုန်းတစ်ခုထဲမှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးတောင်းဆိုသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပျံ့နှံ့ အခြားမှ (အားလုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးရေကူးကန်အတွင်း) ။
ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသင့်သည်ဟုထင်သောအခြားအရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သင်၏ STP ပွဲစားများကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသောရှာဖွေမှုတွင်ပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာလိုင်စင်ရပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ STP ပွဲစားကိုရွေးချယ်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကို Tier-One ကိုယ်ထည်မှထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။
FCA - ယူကေ
ASIC - သြစတြေးလျ
အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများကိုအလွှာတစ်အလောင်းများစွာကထိန်းချုပ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပွဲစားများသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်တိုးတက်လာစေရန်အတွက်စဉ်းစားတတ်လေ့ရှိကြောင်းကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲစားများသည်ကောင်းမွန်သောမှတ်တမ်းနှင့်ကြာရှည်ခံမှုရှိသည် Forex ဈေးကွက်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေများကိုအာမခံခြင်းဖြင့်ခွဲခြားထားပြီးဖုံးအုပ်ထားတာကိုလည်းသင်သေချာစွာသိနိုင်ပါတယ်။
အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း၊ ရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်းကိုကုမ္ပဏီများစွာမှအသုံးပြုသည်။ ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ငွေများကိုသီးခြားစီသိမ်းထားပြီးသင်၏ငွေများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်ကုမ္ပဏီသည်ဒေဝါလီခံပါကသင်၏ကုန်သွယ်ရေးငွေများသည်သူတို့၏ကြွေးမြီ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အကြောင်းအရင်းမှာသင်၏ STP ပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောရန်ပုံငွေကာကွယ်မှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုကုမ္ပဏီ၏ရန်ပုံငွေအဖြစ်ခွဲထားမည်ဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝအာမခံထားနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်မှာရန်ပုံငွေအကာအကွယ်ကောင်းကောင်းရှိရင်၊ သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမှန်အားဖြင့်လုံခြုံစေတယ်။ ထို့နောက်ပွဲစားကုမ္ပဏီနစ်မြုပ်သွားသောကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်တွင်သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုသင့်ထံသို့ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်တတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းအတွက်တရားဝင်တာ ၀ န်ရှိသည်။
အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများသည်၎င်းတို့နှင့်သင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသည့်အခါသင့်အားယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေများကိုပေးလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ STP ပွဲစားများသည်ရန်ပုံငွေများထုတ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်သင့်အားတစ်ပြားတစ်ချပ်မှမတောင်းခံရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းတို့ပွဲစားနဲ့အတူဒီဟာကသူတို့လိုကိစ္စမျိုးဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးသင့်တယ်။
သို့သော်များသောအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတွင်များသောအားဖြင့် markup အနည်းငယ်သာရှိတတ်သည်။ ၎င်းသည်ပွဲစားနှင့်ပွဲစားများကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ STP ပွဲစားတစ် ဦး သည် ၄ ​​င်း၏ငွေကိုမည်ကဲ့သို့ရရှိမည်နည်း။ STP ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏပိုကြီးရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပြီးသင်နှင့်အကောင့်တစ်ခုရှိပါကမည်သည့်ကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေများကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းသိရန်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ ဤနည်းဖြင့်နောင်တွင်မကျေနပ်မှုများကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့ရှိလိမ့်မည်။ လူကြိုက်အများဆုံး STP ပွဲစားများသည်၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းရွေးစရာများရှိပြီး ၂၄/၇ ကို Boot တက်ရန်အတွက်အထောက်အကူရှိသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသင့်ကိုကူညီနိုင်မယ့်အံ့အားသင့်စရာအထောက်အကူပြုကွန်ယက်တစ်ခုလိုချင်တယ်။ ပွဲစားကောင်းတစ် ဦး ကိုရှာဖွေသောအခါသင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရန်ရင်းမြစ်နှင့်သင့်အားအထောက်အပံ့ရရှိခြင်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
ပိုကောင်းသောအဆက်အသွယ်ပုံစံများကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ မည်သည့် STP ပွဲစားများမှမတူကြပါ၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်စင်မြင့်နှင့်သင်ဆက်ဆံမည့်ပုံစံကိုသိနိုင်ရန်သင်၏အိမ်စာကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပါ။
သင်၏ STP ပွဲစားကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့သင်ငွေထည့်နိုင်သည့်နည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ STP ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်ဤကိစ္စနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မည်။
STP ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်သံသယရှိသူအနည်းငယ်နှင့်လက်ခံထားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းရွေးချယ်မှုများစွာကိုပေးသည်။ ဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များမှာ
အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများသည်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များကိုသူတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
STP ပွဲစားတစ် ဦး ကသင့်အားအရင်းအမြစ်များများများပေးနိုင်လေလေ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံများလေလေဖြစ်သည်။
ဤတွင် STP ပွဲစားပလက်ဖောင်းများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အချို့ကိုဖော်ပြပါမည်။
SAR (Parabolic ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်)
Moving ပျမ်းမျှ convergence မတူကွဲပြား (MACD)
ADX (ပျမ်းမျှ directional အညွှန်းကိန်း)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud ဟုလည်းခေါ်သည်)
STP ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကားအဘယ်နည်း။
တကယ်တော့အကောင်းဘက်ကနေရာတွေရှိရင်တော့အားနည်းချက်အတော်များများလည်းရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် STP ပွဲစားနှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးအချို့ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခြင်းသည်မျှတမှုမျှသာဖြစ်သည်။
သင်သိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ micro-lot သည်အခြေခံငွေကြေးယူနစ်တစ်ထောင် (အတွဲ၏ဘယ်ဘက်ရှိငွေကြေး) ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ STP ပွဲစားများသည် micro-lot များတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများသည် ၀.၁ မဲ (၁၀၀၀၀ ယူနစ်) ၏အနေအထားတွင်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်သည် ၀.၁၁ မဲ (၁၀၀၀ ယူနစ်) အတွက်နေရာတစ်ခုဖွင့်လိုပါက၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်လွန်း။ မရပါ။
ငွေပံ့ပိုးပေးသူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုစရိတ်များနှင့်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်မိုက်ခရိုမဲဆန္ဒများကိုလက်လှမ်းမမှီပါကမည်သည့်အကျိုးဆောင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုရှာဖွေရန်သင့်သုတေသနကိုသေချာပေါက်လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
တစ်ဖက်တွင် - သင့်တွင်ဘတ်ဂျက်သေးငယ်သောကြောင့်ကြီးမားသောရာထူးများကိုမဖွင့်လိုသည့်တိုင် STP ပွဲစားသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သည့်ပွဲစားဖြစ်နိုင်သည်။
ဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်တွင်မတည်ငြိမ်သောအဆင့်များ၌ပြန့်ပွားမှုသည်အတော်အတန်များပြားလာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် STP ပွဲစားများမှပြန့်ပွားမှုမှာတသမတ်တည်းနည်းနေကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများပင်လျှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကုန်အကျများနိုင်သည်။ ယင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးအမိန့်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်ကော်မရှင်များအားတရားစွဲဆိုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသောသူတို့အဘို့ဤအဖြစ်ပြနေကြသည် pips (ရာခိုင်နှုန်းအချက်) ။
အချို့ပွဲစားများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် pips များကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ ဤသည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်လက်လီဖောက်သည်များမြင်ရန်ပြန့်ပွားခြင်းတွင်ပေါင်းထည့်လိမ့်မည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မမြင်နိုင်သောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည် သငျသညျ.
မိမိကိုယ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခါထိုဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုအမြဲစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ ပြီးနောက်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွက်ကုန်ကျမည့်အဘယ်အရာကိုမသိမှီ STP ပွဲစားအကောင့်အသစ်ကိုဘယ်တော့မျှမဖန်တီးသင့်ပါ။
STP ပွဲစားနှင့်အတူစာရင်းသွင်းခြင်း - မည်သို့လမ်းညွှန်
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင်ဤအချက်၌ Forex trading ၌ STP ပွဲစားတစ်ယောက်၏အခန်းကဏ္, နှင့်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုသင်ပိုမိုနားလည်သင့်သည်။
ဘောလုံးကိုမလှန်နိုင်မီ၊ မည်သည့် STP ပွဲစားသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည်ကို ဦး စွာဆုံးဖြတ်ရမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမကျူးလွန်မီသင်၏သုတေသနပြုခြင်းကိုအမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။
အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ 2019 Top3ယုံကြည်စိတ်ချရသော Ecn နှင့် Stp Forex ပွဲစား Ic Market Forex ပွဲစား - Forex ပွဲစား
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင် sign up ကိုမှကြွလာသောအခါသင်စတင်ရန်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းအချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်
အဆင့်တစ် - STP ပွဲစားကိုရှာပါ
မည်သည့် STP ပွဲစားသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သည်ကိုမသေချာသေးပါသလော။ မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းထားသောအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများစာရင်းကိုပြုစုထားပါသည်။
အဆင့်နှစ် - ပွဲစားစာရင်းဖွင့်ပါ
ထို့ကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော STP ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ပြီဟုယူဆလျှင်ယခုမှတ်ပုံတင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ မည်သည့်ပွဲစားနှင့်မဆိုပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကဲ့သို့ပင်သင်သည်ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုဖြည့်ရမည်။
မဆိုဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်; လစဉ် ၀ င်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကဲ့သို့သော (တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ပွဲစားနှင့်မတူဘဲကွဲပြားနိုင်သည်) ။
အဆင့်သုံး - သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ပါ
KYC (သင်၏ဝယ်သူကိုသိပါ) သည်အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီစည်းမျဉ်းပွဲစားများကဆောင်ရွက်ရမည့်တရားဝင်တာဝန်ဖြစ်သည်။
STP ပွဲစားသည်သင်၏ဘဏ္ofာရေးအရင်းအမြစ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်နှင့်သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်မင်းရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) အခြားလက်ခံထားတဲ့ ID ပုံစံကိုပွဲစားကိုသာပို့ပေးပါ။
အဆင့်လေး - အကောင့်အတည်ပြုချက်
သင်ဟာအချိန်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနေသည်ဟုခံစားရပါကသို့မဟုတ်တစ်ခုခုမမှန်ကန်ဟုထင်လျှင် STP ပွဲစားများအတွက် customer support ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပွဲစားတစ် ဦး စီသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုသိသောအခါကွဲပြားသည်။ အချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ ကြာနိုင်သည်သို့မဟုတ် ပို၍ ကြာနိုင်သည်။
အဆင့်ငါး - စတင်ပါ
သင်၏ username နှင့်စကားဝှက်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ STP ပွဲစားအကောင့်အသစ်သို့ယခုသင်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်လုပ်ရန်ကျန်သည့်အရာမှာသင်၏ငွေပေးချေမှုကိုရွေးပြီးငွေသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
သင်အနည်းငယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းရှေ့တွင်အပြည့်အဝရှေ့ဆက်နိုင်ရန်သင်၌ STP သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုရှိမရှိကိုလေ့လာရန်သင့်လျော်သည်။
5 ၏အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားများ
သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသင့်တော်သော STP ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါသလော။ အောက်တွင် ၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံး STP ပွဲစား ၅ ဦး ကိုသင်ရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။
၁။ Forex.com - အကောင်းဆုံးဘက်စုံ STP ပွဲစား
Forex.com သည် forex မြင်ကွင်းတွင်အိမ်သူအိမ်သားအမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ECN နှင့် SPN အကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုပေးထားပြီးအနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၅၀ သာဖြစ်သည်။ သင့်တွင် Forex အတွဲ ၉၀ ကျော်နှင့်သင်ထောက်ပံ့သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ၏အမှိုက်ပုံများရှိသည်။ Forex.com သည်နာမည်ကြီးသည့်ပွဲစားတစ် ဦး အနေဖြင့်အလွှာ ၁ ခုမှအများအပြားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
2. FXTM- သုညကော်မရှင်အတွက်အကောင်းဆုံး STP ပွဲစား
ပြင်းထန်စွာထိန်းချုပ်ထားသောအကျိုးဆောင် FXTM သည်ပြည့်စုံသော STP အကောင့်များကိုပေးသည်။ Forex ၏ထိပ်တွင်, သင်သည်လည်းစတော့ရှယ်ယာ, သတ္တု, စွမ်းအင်နှင့်ထို့ထက်ပို။ ရယူနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀ နှင့်သင်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် STP ပွဲစားသည်ပိုကြီးသော bankroll ရှိသောသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ MT500 နှင့် MT4 နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ထားပြီးမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုမဆိုသင်ပေးချေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ Pepperstone စျေးကွက်များ - အကောင်းဆုံး STP ပွဲစားအဆင့်မြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်း
သင် ZuluTrade, cTrader, သို့မဟုတ် MT4 /5စီးရီးများမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ Pepperstone သည်သင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်သည် STP ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုကိုခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏အကောင့်ကို debit / credit card ဖြင့်ချက်ချင်းတင်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်ခွန်၊ ကော်မရှင်နှင့်ပြန့်ပွားမှုသည် Pepperstone နှင့်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အလွန်အလေးအနက်ထားသည်။
သင်ကသြဇာအကန့်အသတ်ရှိသည့် STP ပွဲစားကိုရှာနေပါက Think Markets သည်သင်၏လမ်းပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ 1: 500 အထိရရှိနိုင်သည့်သြဇာရှိခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သည်အများဆုံးအမှာစာဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စင်မြင့်တွင် FCA အပါအ ၀ င်အခြားတဆင့်လိုင်စင်များစွာရှိသည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ မှစတင်သည်။ ၎င်းသည်သင် debit / credit card သို့မဟုတ် e-wallet နှင့်ချက်ချင်းငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည်။
Robo Forex -5Spreads ပါသော STP Accounts
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆန်းကြယ်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်ရော်ဘင် Forex သည်ပွဲစား ၀ င်မှုကို0ပေးသောအွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ STP အကောင့်များမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောစျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းခြင်းမှတစ်ဆင့်သင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်သင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာသာရှိသောအကောင့်တစ်ခုဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကိုကုန်သည်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်အကာအကွယ်ပေးရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများထားရှိခြင်းကိုမှတ်သားထားရန်အရေးကြီးသည်။ အကောင်းဆုံးသော STP ပွဲစားများသည်ထိုအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အပြည့်အ ၀ လိုင်စင်ရရှိလိမ့်မည်။
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ပွဲစားကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းရှိလျှင်လိုင်စင်ရပလက်ဖောင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်အပြည့်အဝမထိန်းချုပ်ထားသော STP ပွဲစား (သို့မဟုတ်မည်သည့်အမျိုးအစား) ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အခါမျှအကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, စျေးကွက်ရှာဖွေသူကျော် STP ပွဲစားနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာသင်သည်စစ်မှန်သောစျေးကွက်တွင်အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ STP ပွဲစားမှတစ်ဆင့်ကိုးကားပေးသောငွေပေးချေနိုင်သည့်ပံ့ပိုးပေးသူများစွာတို့၏ကျေးဇူးကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးကွက်လေလံများကိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းအချက်များအပြင်သင်၏စျေးကွက်အမှာစာများနှင့်ဖြည့်စွက်မှုများသည်မြန်ဆန်မှုနှင့်တိကျမှုတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပွဲစားများကွဲပြားမှု ရှိ၍ သူတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အပြည့်အ ၀ မလုပ်မီသင်၏သုတေသနကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ခြေကိုရှာနေစဉ်အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူစတင်ဖြစ်ကောင်းလည်းအကြံပြုလိုတယ်။